तातोपानी नाका खोल्न चिनियाँ पक्ष हतारिएका छन् : महरा - कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
तातोपानी नाका खोल्न चिनियाँ पक्ष हतारिएका छन् : महरा
भाद्र २५, २०७४-चीन भ्रमणमा रहेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरासँग भ्रमण केन्द्रित मुद्दामा रहेर ग्वान्झाउमा कान्तिपुरका लागि किसन राईले गरेको कुराकानी :
कुनै देशको भ्रमणपछि भ्रमण सफल भयो भन्ने नेपाली नेताका परम्परा नै छ । तपाईंको भ्रमण पनि सफल नै त भन्नु पर्ने होला ?
भ्रमण सफल र असफल भन्ने भ्रमणकर्ताले मूल्यांकन गर्ने विषय होइन, परिणामले देखाउँने र अरुले मूल्याङ्कन गर्ने हो । यस पटकको मेरो भ्रमणको कुरा गर्ने हो भने जो नेता मैले पहिले पनि भेटेको थिएँ, उहाँहरुसँग तुलनात्मकरुपले खुलारुपमा छलफल भयो र विषय केन्द्रित रहेको छ । मेरो अनुभवमा उहाँहरुले विगतमा भन्दा बढी हार्दिकता देखाउनु भएको छ । यस कारण विषयवस्तुहरु यो पटकदेखि मूर्त रुपमा अगाडि लान सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
ऊर्जा र पर्यटन विषयमा दुई सम्झौता भएको सार्वजनिक भएको छ, यसलाई विस्तृतमा बताइदिनुहोस् न ।
पर्यटनको विषयमा त गैरसरकारी संस्थासँग सम्झौता भएको हो । यस विषयमा हाम्रा राजदूतज्यूले बढी पहल गर्नु भएको छ । गौतम बुद्ध सम्बन्धी प्रचार गर्न चीनका विभिन्न शहरमा विविध किसिमका कार्यक्रमहरु गर्ने सम्झौता भएको छ । उर्जाको क्षेत्रमा चाहि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न संयुक्तरुपमा अघि बढ्ने रहेको छ ।
चीनको रेल नेपालमा ल्याउने कुरा गरेको धेरै भयो, यो विषयमा कुनै कुरा भयो ?
यो विषयमा धेरै कुराहरु भइसकेका छन् र यो पटक पनि नहुने कुरै भएन । यसको कार्यान्वयनको विषय बढी महत्वका साथ उठाएका छौं । चिनियाँ पक्षले पनि यस विषयलाई अत्यन्त चासोका साथ लिएको छ । हाइ अल्टिच्युटलगायतका प्राविधिक कुराहरु छन्, तिनलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ ।
तपार्इँको भ्रमणलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणको चीन भ्रमणको पूर्व तयारीको रुपमा लिन सकिन्छ ?
मेरो भ्रमणको एउटा उद्देश्य त्यो पनि हो । उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ नेपाल आउनु भएको बेला हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई चीन भ्रमणको निम्ता दिनुभएको छ । अहिले आएर प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि चीन भ्रमणको इच्छा व्यक्त गर्नु भएको छ, त्यसमा हाम्रो छलफल भएको छ । अनुकूल समय मिलाएर भ्रमण हुने नै छ ।
भ्रमणको मिति तय नभएको हो ?
ठ्याक्कै मिति नै त तय भएन तर उपयुक्त समयमा भ्रमण हुने तयारी शुरु भएको छ ।
चीनको तर्फबाट लामो समयसम्म नेपालको उच्चस्तरीय भ्रमण नभएको विषय पनि बहसको विषय बनेको छ नि ?
चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण बहुप्रतिक्षित विषय बनेको छ । धेरै पहिलेदेखि नै हाम्रोतर्फबाट यो विषयलाई महत्वका साथ राख्दै आएका छौ र यो पटक पनि प्राथमिकताकासाथ राखेका छौं । अनुकूल समय मिलाएर भविष्यमा चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुने हामीले आशा गरेका छौं ।
भूकम्पअघि सुचारु रहेको तातो पानी नाका बन्द भएको लामो समय भयो, पुनर्निर्माण पनि भइरहेको छ तर खुलेन नि π बन्द हुनुको कारण के रहेछ ?
यो विषयमा पनि हामीले कुरा उठाएका छौं । बन्द हुनुको कारण के हो, त्यो त बताइएको छैन । तर खोल्ने सन्दर्भमा सकरात्मक रुपमा कुरा अगाडि बढेको छ । उहाँहरु पनि यो नाका खोल्न हतारिनु भएको मैले महसुस गरेँ । केही तयारीपछि निकट भविष्यमा खुल्ने संकेत हामीले पाएका छौं ।
बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभको बारेमा केही कुरा भयो ?
यस विषयमा दुई देशबीच सम्झौता भइसकेको छ । यसको ठोस कार्यान्वयनको लागि नेपालको पक्षबाट अर्थ र परराष्ट्र सचिव रहने गरी सन्यन्त्र पनि बनाएका छौं । उक्त संयन्त्रले विकासको यस रणनीतिलाई अधिकतम नेपालको पक्षमा उपयोग गर्न काम गरिरहेको छ । यस पटक कार्यक्रम र योजनालाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको छ ।
तीन जनाको मृत्यु ›